Fanontaniana&Valiny niarahana tamin’i Muhammad Zaman Sagar, mpikatroka ho an’ny fiteny Gawri · Global Voices teny Malagasy
Zaman no hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 29 Jolay- 04 Oaogositra 2020
Voadika ny 28 Jolay 2020 15:07 GMT
Sary natolotr'i Muhammad Zaman Sagar.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Muhammad Zaman Sagar (@zamansagar) zay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Rising Voices (RV): lazalazao anay ny momba anao azafady
Muhammad Zaman Sagar (MZS): Muhammad Zaman Sagar no anarako. Teraka ny 1 Aprily 1973 tao Kalam Valley, any amin'ny distrikan'i Swat ao avaratra-andrefan'i Pakistàna. Ny tenindreniko dia ny Gawri (Ethnologue: Kalami, code: gwc).
Nanomboka nanadihady momba ny fiteny aho tamin'ny 1992, fony mbola tovolahy. Ny mpampianatra ahy voalohany, mpitari-dàlana sady mpiahy tamin'izany, dia i Dr Joan Baart, avy any Hôlandy tonga hiasa momba io fiteny io. Nanomboka toy ny mpikaroka mpanampy momba ny fiteny aho raha mbola mpianatra tany amin'ny lisea tamin'izany fotoana.
Taona vitsy taty aoriana, namorona komity niandraikitra ny fitsipi-panoratana aho, niarahako tamin'ireo olona vitsivitsy nahita fianarana avy ao amin'ny fiarahamonina, ary vetivety izahay dia nahatafapetraka ny rafitra anay manokana momba ny fanoratana. Nanomboka nanao fanontàna ihany koa izahay, tamin'io fiteny io, ary vetivety dia nahazo laza ny fikambananay teny anivon'ireo vondrompiarahamonina mampiasa ny fiteny Gawri.
Tamin'ny 2003, nanatevina laharana ny fikambanana iray aho, nantsoina hoe Forum for Language Initiatives (FLI) – Vovonana ho an'ireo hetsika momba ny fiteny- , izay fantatra tany aloha tamin'ny anarana hoe “Frontier Language Institute”. Amin'izao fotoana izao, tale mpanatanteraky ny tetikasa iray antsoina hoe Fandaharanasa Fampiroboroboana ny Vondrompîarahamonina Gawri (GCDP). Manana izahay sekoly enina mampiasa Tenindreny maro ho entiny mampianatra (MTB-MLE) ny ankizy, ary roa ho an'ny olondehibe (vavy sy lahy). Nametraka ihany koa izahay tranomboky izay ahitàna boky miisa 1.500 mahery.
Mpanolotsaina miana-draharaha aho ho an'ny SIL International momba ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary ny fanabeazana sy ny fivoaran'ny fitenim-bondrona ao Pakistàna.
RV: Ahoana ny toerana misy ireo fiteninao ety anaty sy ivelan'ny aterineto amin'izao fotoana izao?
MZS: Amin'izao fotoana izao dia manana tranonkala roa izahay, natokana ho an'ny fiteny Gawri, ary koa pejy media sôsialy marobe, indrindra fa ao amin'ny Facebook sy YouTube.
RV: Mikasika lohahevitra inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro itantananao ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline?
MZS: Horesahako ny momba ireto lohahevitra manaraka ireto:
Fampiasàna Tenindreny maro ho entina mampianatra (MTB-MLE) (MTB-MLE)
Ny fivoaran'ny fiteny sy ny asa fanaovana antontan-kevitra ao Pakistàna
asa fanentanana famakiana teny Gawri
fampianarana ho an'ireo vahoaka mpifindrafindra toerana
Fijery sy fanehoankevitra avy amin'ireo ray aman-dreny sy zokiolona any anaty vondrompiarahamonina momba ny fampiasàna ny tenindreny ho entina mampianatra
Ezaka fampivoarana ny fiteny miainga eny amin'ny fiarahamonina ao Pakistàna
RV: Inona no tena antony manosika ny fikatrohana nomerika ataonao? Inona no fanantenanareo sy nofinofinareo ho an'ireo fiteninao?
MZS: Araka ny ambaran'ny Ethnologue, ny Gawri dia sokajiana ho amin'ny zanatohatra faha- 6b* (Tandindonin-doza) ao anatin'ny Expanded Graded Intergenerational Scale (EGIDS) (maridrefy mitatra hatrany amin'ireo taranaka mifandimby), izay mandrefy ny fahavelomana / fahavitrihan'ny fiteny. Tianay ny hampiakatra azy ho eo amin'ny zanatohatra faha-4 (Entina mampianatra), voafaritra araka izao manaraka izao: “Ampiasaina amin'ny fomba mavitrika ilay fiteny, ary tohanan'ny rafi-pampianarana ankapobeny izay tohanan'ireo andrim-panjakana ny fampanarahana fenitra sy ny literatiora”. Miezaka manome ny tsara indrindra avy aminay izahay mba hitondràna tsara ireo fanentanana fandresena lahatra sy hisoloana tena ilay fiteny ety anaty media nomerika, ary efa nisy fiovàna goavana hitanay sahady tamin'ny fitondrantenan'ireo mpiteny azy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa, nasongadina sy nampiroboroboina be io fiteny io.
Mediam-bahoaka 18 Aogositra 2020